Android လုလင်: December 2013
Android OS သုံးတဲ့ Device တွေမှာဓါတ်ပုံလည်းရိုက်၊ ပြင်လည်းပြပင်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် PicsPlay Pro v3.5.3 Apk ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. လှပသေသပ်တဲ့ Effect များစွာပါဝင်ပြီး Tool တွေလည်းစုံပါတယ်.. GooglePlay မှာ ဝမ် 3000 ကျသင့်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ အလကားပေါ့ခင်ဗျာ..
Fast Burst Camera v4.4.8 Apk ( တစ်စက္ကန့်မှာ ပုံ ၃၀ ရိုက်နိုင်တဲ့ ကင်မရာ app )
Fast Burst Camera v4.4.8 Apk ဟာ Android သုံး Device တွေမှာ တစ်စက္ကန့်ကို ပုံ ၃၀ ထိ ရိုက်နိုင်တဲ့ အမြန်ဆုံး ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်.. ရုတ်တရက် ဓါတ်ပုံပေါင်းများစွာကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ရိုက်နိုင်ပါတယ်.. Google Play မှာ DKK 20 ကျသင့်ပါတယ်..
Huawei ဖုန်းအားလုံးတွင် Google Application သွင်းနည်း
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Huawei ဖုန်းများတွင် Google Application ထည့်သွင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ Huawei ဖုန်းများတွင် CWM recovery သွင်းပြီးသွားလျှင် google application ကို ထည့်လို့ရပါပြီ။ CWM recovery ဟာ English version လည်းဖြစ်နိုင်သလို Chinese version လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် ၂ မျိုးလုံးကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Android version ပေါ်လိုက်ပြီး Google Application ကို တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM7comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Contacts,SMS တွေကို Clockworkmod Recovery က နေ Backup / restore လုပ် မယ်
Android Devices တွေ အတွက် Contact,SMS တွေ ကို Clockworkmod Recovery မှ တစ်ဆင့်Backup,Restore လုပ်နိုင်မှာပါ။Logo ကနေ ဆက်မတက်နိုင်တော့တဲ့အခါ Data တွေ ပျက်ဖို့သေချာသလောက် ရှိနေပေမယ့်။ clockworkmod recovery ၀င်လို့ရနေသေးတယ်ဆိုရင်
contact နဲ့ SMS တွေကို Backup လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Wifi Password တွေကို 95%အမှန်အကန် Hack ပေးနိုင်တဲ့ WIBR+ WIfi BRuteforce Hack APK
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ ကျွန်တော့်ဆရာသမားလည်းဖြစ် ဆေးထိုးဖော်လည်းဖြစ်တဲ့
အိုင်တီ မုဆိုးပေးတဲ့ Application လေးဖြစ်ပါတယ်။ Hacker ကြီးသုံးနေတဲ့ Application ဆိုတော့ နယ်နယ် ရရတော့ မဟုတ်လောက်ဖူးနော်။ ကျွန်တော်ကလည်း ရရချင်းစမ်းသပ်ကလိနေတုန်းပါဘဲ။ အခု Application နဲ့ ရခဲ့ဖူးတဲံWifi Password တွေရှိတယ်လို့ Hacker ကြီးကပြောပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Wifi တွေရှိတဲံ ဘော်ဒါများ အတွက် ဒေါင်းယူထားသင့်ပါတယ်ဗျာ။
အကြောင်းအရာ hacking, ဆော့ဝဲ
ဒီကောင်လေးက ဘူးချင်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တောင်းလာ လို့ ပါ..
ပြီးတော့ Dec 20 ရက် နေ့ကမှ V 3.0.2 Update ထွက်လာတဲ့ APP လေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကောင်လေးက ဘာလုပ်တဲ့ ဟာလဲ ဆိုရင် Adult Photo တွေ ကြည့်ရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး ကောင်မလေးတွေလဲ သတိထားရမဲ့ Apk ဖြစ်ပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုရင် ရိုးရိုး ကောင်မလေး တစ်ယောက် ပုံကို ဒီ Apk သုံးပြီး Adult Bikini Photo လုပ်ပစ်လို့ရပါတယ်.. သတိထားရအောင် တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်သလို အားလုံးကို ဒီလို လုပ်လို့ ရတယ် ဆိုတာပါ သိအောင် တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်.. အားလုံးသိအောင် ရှယ် ပေးစေလိုပါတယ်..
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 10 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Huawei Y511-U00 Firmware တင်နည်း
ဒီ firmware လေးကအရေးကြီးလို့ ဒေါင်းရင်
ပြန်တင်ပေလိုက်ပါတယ် အခက်ခဲရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်တယ် တော်တော်လေး ရှာလိုက်တော့မှ china site တစ်ခုကနေ တွေ့တယ်...
အခုတော့ firmware ပြန်တင်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ...
အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အဲလိုဖြစ်ရင် ပြန်တင်လို့ ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 8 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေလည်လန်းတဲ့ Cool Photo Transfer (ဖုန်းနှင့် ကွန်ပြူတာ ကြိုးမဲ့ဓါတ်ပုံပို့နည်း)
လုံးဝ အလန်းကြီးဗျာ။ ဖုန်းထဲက ဓါတ်ပုံများကို ကွန်ပျူတာသို့ ..ကြိုးမဲ့ ပို့နိုင်မယ့် photo transfer app လေးပါ။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျုတာကို wifi ချိတ်ပြီး ပို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာမှာ Cool Photo Transfer server ဆော့ဝဲကို ထည့်ရပါမယ်။ ဆော့ဝဲ ထည့်ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ App နဲ့ ..ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 5:34 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android 4.3 အထက်တွေအတွက်သီးသန့် ZawgyiOne.ttf မြန်မာဖောင့်
Android V4.3 အထက်တွေရဲ့ ဖုန်းမှာ ( -ျ ) ( -ု ) ( -ူ ) ( -ာ ) ( -် ) ( -့ ) တွေ
အထဲကိုဝင်နေတဲ့ပြသနာကို ကျနော်အနည်းငယ်ဖြေရှင်းထားပါတယ် ။ စာကိုတည့်မှန်စွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမပုံကတော့ ဖောင့်မထည့်ခင်ကပုံပါ ။
ရေးတဲ့အချိန် 4:05 PM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Christmas ကာလကိုရောက်ခါနီးလာတော့ Christmas HD Live Wall Paper လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. HD Format အပြည့်နဲ့ သေသပ်ပြီး ပြောင်မြောက်လှတဲ့ Christmas HD ကို Google Play မှာ 0.99 ဒေါ်လာပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့်ဒီမှာတော့ အလကားပေါ့ခင်ဗျာ..
Samaung android phone များအား GSM Network unlock ပြုလုပ်နည်း
Root မလိုပဲ GSM Network unlock ဖြည်တဲ့နည်းပါ။ Samsung တော်တော်များများ မှာ ရပါတယ်ခင်ဗျာ လုပ်ပုံလုပ်နည်းခြင်းကတော့
ရေးတဲ့အချိန် 1:52 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Network Unlock Code မလိုပဲlockဖြည်လို.ရပါပြီခင်ဗျာ
အကိုကျွန့်တော့်G 610 c and gနစ်ကတ်သုံးb122firmwareတင်လိုက်တာnetwork lockကျသွားလို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲနော်ကူညီပေးပါ
အမေးလေးနဲ့ သက်ဆိုင်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါနော် ။
Huawei hacker tool လေးနဲ. C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Network Unlock Code မလိုပဲlockဖြည်လို.ရပါပြီခင်ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 1:48 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android လုလင်ပရိသတ်တွေထဲမှာ scalable ဆော့ဖူးတဲ့သူတွေပါမယ်ထင်တယ်နော်။
ခုဒီဂိမ်းလေးက scalable နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်ဆိုပေမယ့် သူကတော့ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတွဲကိုပဲ ရှာပေးရမှာပါ။ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်ရင်နားလည်သွားမယ်ထင်တယ်နော်။
ကဲ ချစ်သူရည်းစားရှိကြတဲ့ Android လုလင် ပရိသတ်​ ကိုကို မမ ညီ ညီမ များ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့နီးစပ်နိူင်ခြေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ app လေးသာမသွားလိုက်ပါ။
Application မှာတော့ ဖူးစာရှင်ရှာကြမယ်တဲ့နော်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Gsm ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်နိုင် ငွေစစ်နိုင်တဲ့ widgest စတိုင်လေးနဲ့ ဆော့ဝဲ အသစ်လာပြီ
ကဲ ခေါင်းစဉ်မှာကိုကအပြည့်အစုံရေးထားတော့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ရုံနဲ့ အားလုံးနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်နော်။
အဲ ခါတိုင်း ဖုန်းဘေဖြည့်ဆော့ဝဲတွေထက်လန်းတာက
ဒီကောင်လေးက ဖုန်းရဲ့ home screen မှာ widgest ထားပြီးတော့ သုံးရတာပါ။
ဒီ widgest လေးထားထားရုံနဲ့ ဒီဆော့ဝဲရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်
နာရီ ကြီးကြီးနဲ့ မြန်မာပြက္ခဒိန် widgest လန်းလန်း လေးကိုလည်းခံစားရအုံးမှာပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ 2014 နှစ်သစ်ကို ရောက်တော့မှာနော်။
2013 မြန်မာပြက္ခဒိန်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး 2014 ကို သုံးရတော့မှာပေါ့
ကိုကို ညီညီ တို့အတွက် နောက်ထပ် sexy game အလန်းလေး(သတိ !!! မြန်မာမိန်းကလေးများမဒေါင်းရ)
ကိုကို ညီညီတို့အကြိုက်တွေ့မယ့် နောက်ထပ် sexy game အလန်းလေးနော်။
လုလင်ပျို ဆီကို sexy game လေးတွေ တင်ပေးဖို့ Rrquest လာလုပ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် fake တွေများတဲ့အတွက် အပိုဖြစ်မှာစိုးလို့ တင်မနေတော့တာ။
အခုဒီဂိမ်းလေးကတော့ မိုက်လည်းမိုက်တာမို့ ဘော်ဘော်များလည်း ဆော့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုယ့် zapya ကနေ ကိုယ်မသိပဲ data တွေလာမယူရအောင် zapya connecting ကို password ခံထားနည်း
ကဲ ဒီနေ့ zapya နဲ့ပတ်သက်တာတွေတင်မယ်ဆိုပြီးလာတာ ခုနကတော့တစ်ပုဒ်ပြောပြီးပြီ ခုတစ်ပိုစ့် ဆက်ရေးမယ်နော်
password ခံထားနည်းဆိုပေမယ့် လုံးဝကြီိးကိုလုံခြုံတယ်လို့မပြောဘူးနော်
zapya နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ရေးမယ်ဆိုပြီးလာတာမို့ ဒါလေးပါ သိရအောင်ဆက်ရေးလိုက်တာ
သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းမှာဘယ်ဆော့ဝဲပဲထည့်ထားထည့်ထား system setting ကိုအသုံးပြုလို့ရနေမယ်ဆိုရင်တော့ လုံခြုံမှူကလုံးဝမရှိတာပါ
တော်ရုံတန်ရုံလူတွေကတော့ ပိတ်ထားလို့ဖွင့်မရရင် ဘာမှဆက်မလုပ်ပဲ back ဆုတ်သွားနိုင်ပေမယ့် လုလင်ပျိုတို့လို ကလိတတ်တဲ့သူတွေနဲ့တိုးရင်တော့ လုံခြုံမှုဆိုတာ ခုခေတ်မြန်မာမိန်းကလေးပါ အဲ အဲ ဗလာနတ္ထပါပြောတာ ခ်ခ် မှားလို့
ထားပါ ခု ခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆက်ပြောရအောင်
zapya နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်တဲ့အခါ ပတ်ဝေါ့ပေးထားတဲ့ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ group ထောင်ပြီးချိတ်မယ်ဆို ပတ်ဝေါ့တောင်းပါတယ်
Backup ဆော့ဝဲမလိုဘူး super zapya ကနေပဲbackup လုပ်မယ်
zapya ဆော့ဝဲကိုတော့ Android ဖုန်းသုံးသူတိုင်းမသိသူမရှိဘူးထင်ပါတယ်နော်
Android ဖုန်းတစ်လုံးဆိုရင် zapya နဲ့ viber မပါရင် android ဖုန်းမဟုတ်တော့မယ့်အတိုင်းပဲနော်
ခု လုလင်ပျိုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ ခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်
မသိတဲ့သူတွေကိုဖောမယ် အဲ ပြောမယ် hee he
ရေးတဲ့အချိန် 7:18 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
5-12-2013 ထွက်လာတဲ့ Viber Version အသစ်လိုချင်သူများအတွက်
မိမိမျက်နှာကို Live Wallpaper အဖြစ်နဲ့မြင်နေရမဲ့ Mirror Live Wallpaper ( for Android )
ဒီတစ်ခါဆန်းသစ်မှုလေးနဲ့ Live Wallpaper လေး
ရှေ့ ကင်မရာပါရပါမယ်ဗျာ. ဒါကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့
I'm Busy Now.apk ( ကိုယ့်ဖုန်းကို တကယ်မအားကြောင်းလုပ်နိုင်မယ့် Black List App )
သုံးနေကျ Black List App တွေက တစ်ချက် Ring Call ခေါ်ပြီးမှ Busy ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်တတ်ကြပါတယ်.. I'm Busy Now ဆိုတဲ့ apk နဲ့ဆိုရင်တော့ First Ring လုံးဝ မမြည်တော့ဘဲ Busy ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပေးတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကောင်လေးကို ဖွင့်လိုက်.. ကိုယ် Black List လုပ်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်. Add ကိုနှိပ်. ပြီးရင် အဲဒီဖုန်းနံပတ်နဲ့ ကပ်လျက်က ဖုန်းပုံလေးကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်. ဖုန်းပုံလေးက အနီရောင်ပြောင်းသွားပြီး အပေါ်က ဘာလေးမှာ I'm busy, Now is working လို့ပေါ်လာရင် ဒီဖုန်းကို Busy ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်နေပါလိမ့်မယ်.
Next Launcher 3D v3.0 Apk (Dec-6)
(Dec-6) ကမှအသစ်ထွက်လာတဲ့ လူကြိုက်များပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ Next Launcher 3D v3.0 ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ အခု Version အသစ်မှာတော့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ အနည်းငယ်ပြောင်းလာပြီး ပိုပြီးလည်းလန်းလာ တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ Nest Launcher ကတော့ လူသိများတဲ့အတွက်ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးနော်။ အောက် မှာနမူနာအနေနဲ့ Screen Shot ကိုရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Shake Call Accept v.1.0 (ဖုန်းလာပြီဆိုရင် လှုပ်ပြီးကိုင်လို့ရတယ်)
Shake Call Accept ဆိုရင်လူတိုင်းနားလည်ပါပြီထင်တယ်။ ဖုန်းလေး လှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ incoming call တွေကို နောက်လက်မအားလည်း ရပါတယ်။ အေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဖုန်းပြောလို့ပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက် ကျသွားလိမ့်မယ်။ Google Play မှာ rating 4.1 ရထားတဲ့ apk ပါ။ October62013 ထုတ်ပါ။ သဘောကျသွားပါလိမ့်မယ်။
Next Launcher 3D Version 2.09 ( for Android )
Next Launcher ချစ်သူများအတွက် အသစ်လေးတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ. Version 2.09 လေးပါနော်.. ဒီကောင်
Facebook မှာ သီးသန့် Chat ချင်သူများအတွက် - Facebook Chat v1.6 APK
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application ကတော့ Facebook ချစ်သူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook Chat သီးသန့်သုံးလိုသူများအတွက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Post တင်ဖို့အတွက်စမ်း သုံးကြည့်တာအတော်လေးသဘောကျလို့ လက်ရှိဒါလေးကိုဘဲသုံးနေပါတယ်။ Facebook Messenger ထက် သဘောကျလို့ Uninstall လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့ ကွန်နရှင်မကောင်းရင်တောင်မှပေါ့ပေါ့ အသုံးပြုနိုင်လို့ပါဘဲ။ File Size ကလည်း 2.5MB လေးဘဲရှိလို့ လွယ်ကူစွာဘဲ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Rocket Player Premium (Full Version) Andriod ဖုန်းတွေအတွက် အရမ်းလန်းတဲ့ Player လေးပါ။
Rocket Player လေးက Andriod ဖုန်းတွေအတွက် Player လေးပါ။ ကျနော်လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Player လေးပါ။ Mp3 တခုထဲ မကပဲ Video ပေါင်းစုံကို Rocket Player တခုတည်းမှာပဲ ဖွင့်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အသံလည်း လိုသလို ချိန်လို့ရပါတယ်။ Playstore မှာ US$3.99 ဒေါ်လာ နဲ့ ပေးဝယ်ရတဲ့ Rocket Player Premium Unlocker လည်း တွဲတင် ပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ Full Version အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Free Wifi တွေကို Auto ရှာပြီး ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် - WiFi Master Key - Wifi locating v0.8.6 Beta 16 APK
ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘော်ဒါများ သဘောကျသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် လည်း သဘောကျပါတယ်။ အတော်လေးသဘောကျလို့ တွေ့တွေ့ချင်းဘဲ ချက်ခြင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ။ စမ်းတာကတော့ မနက်ဖြန် Sunday ကျမှဘဲ အပြင်သွားရင်စမ်းရမယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လေးက WiFi ဖွင့်ပြီး ဒီ Application လေးကို Run လိုက်တာနဲ့ Free WiFi တွေကို လိုက်ရှာပေးပြီး လိုင်းအကောင်းဆုံး မိမိနဲ့အနီးဆုံးလိုင်းနဲ့ အလိုလျှောက်ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
RootGenius ဟာ မထင်မရှား. ဆိုပေမယ့် ခုနောက်ဆုံးထွက် Huawei P6 ကိုတော့ ကောင်းကောင်း Root နိုင်ပါတယ်.. Eroot နဲ့မရတဲ့ P6 ကို ဒီကောင်နဲ့ Root ပါ.. လက်တွေ့ပါ.. ပြီးတော့ Nexus တွေအပါအဝင် Model ပေါင်း 300 ကျော်ကို Error ကင်းကင်း နဲ့ Root ပေးနိုင်ပါတယ်..
Fast Burst Camera v4.4.8 Apk ( တစ်စက္ကန့်မှာ ပုံ ၃၀...
Huawei ဖုန်းအားလုံးတွင် Google Application သွင်းနည...
Contacts,SMS တွေကို Clockworkmod Recovery က နေ Bac...
[18+ Only] မိန်းခလေးများ ညစ်ပတ် မခံရစေဖို့ နှင့် ဘ...
ရေလည်လန်းတဲ့ Cool Photo Transfer (ဖုန်းနှင့် ကွန်ြ...
Android 4.3 အထက်တွေအတွက်သီးသန့် ZawgyiOne.ttf မြန်...
Samaung android phone များအား GSM Network unlockြ...
C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Network Unlock C...
Gsm ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်နိုင် ငွေစစ်နိုင်တဲ့ ...
ကိုကို ညီညီ တို့အတွက် နောက်ထပ် sexy game အလန်းလေး(...
ကိုယ့် zapya ကနေ ကိုယ်မသိပဲ data တွေလာမယူရအောင် za...
Backup ဆော့ဝဲမလိုဘူး super zapya ကနေပဲbackup လုပ...
5-12-2013 ထွက်လာတဲ့ Viber Version အသစ်လိုချင်သူမျာ...
မိမိမျက်နှာကို Live Wallpaper အဖြစ်နဲ့မြင်နေရမဲ့ M...
I'm Busy Now.apk ( ကိုယ့်ဖုန်းကို တကယ်မအားကြောင်းလ...
Rocket Player Premium (Full Version) Andriod ဖုန်း...